Diyaarad shil ku gashay garoonka Aadan cadde & Wararkii ugu dambeeyey (Sawirro) – Xeernews24
Diyaarad shil ku gashay garoonka Aadan cadde & Wararkii ugu dambeeyey (Sawirro)
10. Oktober 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Shil diyaaradeed ayaa galabta ka dhacay garoonka diyaaradaha Aadan cadde ee magaalada Muqdisho ka dib markii diyaarada ay u bixi waayeen luguhu soona degtay taayero la’aan.
Dayuuradan oo aheyd nooca yar yar ee xamuulka qaada ayaa shafka dhigatay dhabaha ay dayuuraduhu ku cararaan, iyadoo aan la sheegin waxyeelo ka dhalatay shilkaas.
Duuliyeyaasha iyo shaqaalaha kale ee la socday dayuuradaas ayaa la sheegay in iyagoo bad qaba laga soo dejiyey dayuurada oo wararku sheegayaan in cilad farsamo awgeed ay sababtay iney u bixi waayaan taayerada.
Muddo kooban ayaa waxaa hakaday howlihii garoonka dayuuradaha ka dib shilkaas, waxayna dib u bilowdeen saacado yar ka dib markii dayuuradaas laga jiiday dhabaha ay dayuuraduhu ka soo degaan kana haadaan.
Sannado ka hor dayuurad tan la mid ah ayaa shil noocan ah ku gashay garoonka Aadan cadde ka dib markii ay taayeradu u bixi waayeen maamulka garoonka Aadan cadde ayaana ka hadlin dhacdadan u dambeysay ee maanta.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/10/day.jpg 320 640 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-10-10 01:32:382019-10-10 01:32:38Diyaarad shil ku gashay garoonka Aadan cadde & Wararkii ugu dambeeyey (Sawirro)
Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan oo ku baxay xiisad ka dhex taagan Ciidamada Jabuuti... Aas Qaran oo Loo Sameeyey Maareeyihii Dekeda Jabuuti marxuun Sacad Cumar Ge...